Dalet အခမဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းအသစ်၊ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Dalet "Dalet အကယ်ဒမီ", နယူးအခမဲ့ပညာရေးပလက်ဖောင်းလွှတ်တင်
Dalet "Dalet အကယ်ဒမီ", နယူးအခမဲ့ပညာရေးပလက်ဖောင်းလွှတ်တင်
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - ဇန်နဝါရီ 28, 2015 - Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အ software ကို-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့က၎င်း၏အသစ်သောအွန်လိုင်းပညာရေးပလက်ဖောင်းများ၏ပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ Dalet အကယ်ဒမီ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်နိူးထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာမှသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့, အ Dalet အကယ်ဒမီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိုသာဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းပေမယ့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထွန်းသစ်စနည်းပညာများ, ကိစ္စများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏စီးပွားရေးဂယက်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အခမဲ့အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း၏ Dalet ရဲ့ lineup ဖွငျ့ရေးသားသည့် Dalet ဘလော့, ပါဝင်သည်; Dalet ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မီဒီယာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် MXF Co-ရေးသားသူဘရုစ် Devlin အားဖြင့်တည်ခင်းဧည် "ဘရုစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတို" ဟုအဆိုပါအလွန်အမင်းအောင်မြင်တဲ့ဗီဒီယိုအားစီးရီး; အမှုလေ့လာမှုများ, အဖြူစာတမ်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်းပါးများကို; webinars; နှင့် In-depth ကိုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ။
"ဒီ Dalet အကယ်ဒမီ, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပျော်စရာအတွက်ထွန်းသစ်စမီဒီယာနည်းပညာ၏ရှုပ်ထွေး demystify ကူညီပေးသည်ကြောင်းအွန်လိုင်းမှသယံဇာတများအတွက်လိုအပ်ချက်, ပါဝငျနှင့်သိကောင်းစရာများထုံးစံကိုအမှုဆောင်ခြင်း, AmberFin အကယ်ဒမီ၏အောင်မြင်မှုကိုအပျေါမှာတည်ဆောက်" ဘင် Davenp သို့မဟုတ် t, စျေးကွက်၏ညွှန်ကြားရေးမှူး Dalet ဆိုပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးထောင့်ကနေမိုဃ်းသီးကျသူကိုမျှဝေသူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရေကူးကန်မှကျေးဇူးတင်ပါသည် Dalet အကယ်ဒမီကောင်းစွာသက်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်အရေးကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်အကြောင်းကြားရပ်ရွာစောင့်ရှောက်ခြင်း, အကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့ဖုံးလွှမ်း, ကြှနျုပျတို့နေချိန်မှာမျှော်လင့်ပျော်စရာတစ်နည်းနည်းရှိခြင်း 'ကမှာပြန်လည်။ "
သင် Dalet အကယ်ဒမီတှငျအဘယျတှေ့ရလိမျ့မညျနညျး
Dalet ရဲ့ဘလော့: သင်ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် ပတ်သက်. သင့်စကားဝိုင်းများအတွက်အစွန်းပေးရ Dalet ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကနေထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှာဖွေရန်
ဘရုစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတိုများ ": အကယ်ဒမီရဲ့အပတ်စဉ်ကဗီဒီယိုစီးရီးမှ Subscribe ဘရုစ် Devlin, Dalet ရဲ့အကြီးအကဲမီဒီယာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် MXF Co-စာရေးဆရာ, တိုတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုမှာတစ်ရှုပ်ထွေးပြဿနာကရှင်းပြသည်ရှိရာ။ subscribers အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ခေါင်းစဉ်အကြံပြုဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည် [အီးမေးလျ protected]။ ဘရုစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတိုအတွက်မျှော်လင့်သောအရာကိုတစ်အရသာများအတွက်, ကနေဗီဒီယိုအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ Dalet အကယ်ဒမီ YouTube ကိုစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်ဘရုစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတိုရာသီ 1.
White ကစာတမ်းများ: ရှုပ်ထွေးသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ Workflows အသံလမ်းညွှန်မှုနှင့်ရှင်းပြချက် Get Dalet အကယ်ဒမီမှကျေးဇူးတင်စကား In-depth ကိုအဖြူစာတမ်းများ
Webinars: အဆိုပါအကယ်ဒမီရဲ့အခမဲ့ webinars ထိုကဲ့သို့သောပေးခဲ့သည်နည်းပညာ, ဗီဒီယိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့် Dalet ရဲ့ "ကြည်လင်ဘောလုံးကို" webinar နှင့်အတူအနာဂတ်သို့ပင်တစေ့တစောင်းအဖြစ်ပူပြင်းသည့်အကြောင်းအရာများသို့နက်ရှိုင်းစွာငုပ်ဆက်ကပ်။ ပထမဦးဆုံးအ webinar "UHDTV သည်အနာဂတ်အဘို့ဖြစ်၏ကဘာလဲနှင့်အဘယ်ကြောင့်ငါအခုတော့စိုးရိမ်သင့်?" ကြာသပတေးနေ့ဖေဖော်ဝါရီ 19th, 16 အပေါ်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်: 00 CET ။ ဒီနေရာမှာမှတ်ပုံတင်ပါ.
in-depth ကိုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ: Dalet ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအကယ်ဒမီရဲ့သာပေးဆောင်-များအတွက်အကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားသီးသန့်သင်ခန်းစာများဖောက်သည်ရုပ်သံလိုင်းနှင့်နည်းပညာမိတ်ဖက် Dalet ရန်, ယခုအဘို့, reserved နေကြသည်။
ယခင်က AmberFin အကယ်ဒမီဖြင့်ဖုံးလွှမ်းပစ္စည်းအပေါ်တိုးချဲ့နှင့် "ဘရုစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတို" လက်ရှိစာရင်းသွင်းသူများအားဖြင့်အကြံပြုခေါင်းစဉ်များအများအပြားရာပေါင်းများစွာအကောင်အထည်ဖော်, Dalet အကယ်ဒမီကိုဖြတ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောနက်နဲသောပင်လယ်အတွင်းဖုံးလွှမ်းမည်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဘာသာရပ်များပါဝင်သည်:
UHDTV, colorimetry နှင့်အရာဝတ္ထု-based သံကိုအပါအဝင်နယူးထုတ်လွှင့်နည်းပညာများ,
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ versioning, စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် metadata စီမံခန့်ခွဲမှုအပါအဝင်လက်တွေ့ Workflows,
, စာတန်းများကိုင်တွယ်ဘောင်နှုန်းထားများပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အိမ်ဖိုင် Format နှင့် schemas အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအပါအဝင်လက်တွေ့ applications များ,
Virtualization ၏, မိုဃ်းတိမ်, သိုလှောင်မှုလဲ tutorial နှင့်ယာယီနေရာချထားခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအပါအဝင်အိုင်တီ,
Dalet အကယ်ဒမီအသုံးပြုသူများကိုဖိတ်ကြားထားပါသည် subscribe တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဘလော့, ဘရုစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတို, အမှုလေ့လာမှုများ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်အဖြူစာတမ်းများမှ, ဒါမှမဟုတ်ပိုမိုနှစ်သက်သည်မှန်လျှင်, တဦးတည်းကလစ်နှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးအရာအားလုံးရန်။
အဘယ်သူသည်အကယ်ဒမီ join သင့်သလဲ
ကျောင်းသားများကိုထံမှပြိုင်ဘက်မှစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, အနာဂတ်ဖောက်သည်လက်ရှိ, မိတ်ဖက်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဝါရင့်ရန်, အကယ်ဒမီရုံအကြောင်းကိုလူတိုင်းများအတွက်သင်ခန်းစာရှိပါတယ်။ Dalet အပါအဝင်အခြားလေ့ကျင့်ရေးကောင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် SMPTE, အ IABM နှင့်တက္ကသိုလ်များအားလုံးအကယ်ဒမီအကြောင်းအရာဆန္ဒရှိအားလုံးအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားကိုဖြတ်ပြီးကျောင်းသားများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်၏အရည်အသွေးမြင့်ပရိသတ်ကိုအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းသေချာစေရန်။
ပွင့်လင်းသောပညာရေးပလက်ဖောင်းအတိုင်း, Dalet အကယ်ဒမီလည်းမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များအနေဖြင့်ပံ့ပိုးမှုများကြိုဆိုသည်။ အသုံးပြုသူများမှာ Dalet အကယ်ဒမီအယ်ဒီတာများဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ခေါင်းစဉ်, ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများအကြံပြု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကြင်နာတဲ့အလှူငွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် [အီးမေးလျ protected].
အကောင်းဆုံးကိုဆွေးနွေး၏အချို့စာသင်ခန်းပြင်ပဖြစ်ပျက်။ အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow YouTube ကို, တွစ်တာ,LinkedIn တို့ နှင့် Google+ မှာ အကယ်ဒမီအဖြစ်အပျက်အပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့နဲ့စီးသောစကားပြောဆိုမှုစောင့်ရှောက်ရန်။ လာမည့်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်အများဆုံးကို up-to-date ဖြစ်အောင်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီးacademy.dalet.com/events.
အဆိုပါ Dalet အကယ်ဒမီ edited နှင့်ထုတ်ဝေသောဖြစ်ပါတယ် Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်အဘို့, ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected]။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, Anya Oskolkova မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
အကြောင်းအရာ Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ
Dalet software ကို-based ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးအားပူးတွဲတင်ပြထားပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ပိုမြန်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ enable နှင့်။ Dalet ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်သည့်အခါက, သုံးကွဲပြားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကြသည်, ထိုသတင်း, အားကစား, အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်မှု, ထုတ်လုပ်ခြင်း, archive ကိုများနှင့်ရေဒီယိုအဘို့ပါဝါအဆုံးမှအဆုံးသို့ Workflows စွယ်စုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ တစ်ဦးချင်း, Dalet ပလက်ဖောင်းနှင့်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စားသုံးမိ, QC, ပြင်ဆင်ရန်, transcode နှင့် multiplatform ဖြန့်ဖြူးအဖြစ်အရေးပါမီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန် key ကိုစွမ်းရည်နှင့်အတူလျာထားသော applications များဆက်ကပ်။ Dalet ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအား-တိုးမြှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်, Dalet က Galaxy မျိုးစုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကိုဖြတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှု, metadata ကို, workflow နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာကွင်းဆက် unifies သောလုပ်ငန်း NRCS နှင့်ပေးခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသသတင်းနှင့်မီဒီယာ Workflows တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့, ဒီထူးခြားတဲ့နည်းပညာပလက်ဖောင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်စီးပွားရေးမြင်ကွင်းပေးစဉ်ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာပညာရှင်များကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ကူညီပေးသည်။
Dalet AmberFin တစ်ဦး, အရွယ်မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါလမ်းအတွက်ကြီးမြတ်ဓါတ်ပုံတွေကိုဖြစ်စေအဆောက်အဦဖွင့်, QC နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွမ်းကျင်, အပြည့်အဝပေါင်းစည်းစားသုံးမိနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်, အရွယ်မှာ transcoding ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏တောင်းဆိုလိုအပ်ချက် addressing, Multi-ကင်မရာစားသုံးမိ, အားကစားသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပျေါလှငျထုတ်လုပ်မှုသည်ဆန်းသစ်သော Dalet Brio ဗီဒီယိုကဆာဗာကိုပလက်ဖောင်းမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူသိပ်သည်းဆနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုပေါင်းစပ်။
Dalet ကောင်းစွာစီမံကိန်းကိုကွပ်မျက်ကျော်လွန်ဖို့ကနဦးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဆင့်ဆင့်ကနေဖောက်သည်ထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိနေခြင်း 15 ဗျူဟာမြောက်ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာရှပစိဖိတ်, မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကတစ်လျှောက်လုံးတည်ရှိရုံးများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 60 နိုင်ငံများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ထက်ပို 87 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ဖက်များ၏ကွန်ယက်တို့ပါဝင်သည်။ ဒါဟာစုပေါင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား, ထိရောက်မှုနှင့်တန်ဖိုးအတွက်အလားအလာတိုးမြှင့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပြည့်စုံ Dalet စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုများထားရှိဖွင့်ဆက်လက်တည်ရှိခြင်းနှင့် 24 /7ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ 365 ရက်ပေါင်းတစ်နှစ် running သေချာ။
Dalet စနစ်များတီဗီရာပေါင်းများစွာနှင့်အများပြည်သူထုတ်လွှင့်အပါအဝင်ရေဒီယိုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများ, (ကို ABS-CBN, ဘီဘီစီ, CBC, DR, ပြင်သစ်တီဗီ, RAI, RFI, ရုရှားယနေ့ RT ကိုမလေးရှား, ဗွီအိုအေမှာတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာအားဖြင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းအသုံးပြုကြသည် ), စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်နှင့်အော်ပရေတာ (Antena 3, တူးမြောင်း + FOX, eTV, MBC ဒူဘိုင်း, MediaCorp, Mediaset, လိမ္မော်ရောင်, Time Warner Cable ကို, Warner Bros, Sirius XM ရေဒီယို) နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (Commons ၏ကနေဒါအောက်လွှတ်တော်, ဖင်လန်လွှတ်တော်, သြစတြေးလျ ပါလီမန်) ။
AmberFin အကယ်ဒမီ အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ Dalet Dalet အကယ်ဒမီ Dalet ရဲ့ဘလော့ ပညာရေး သိုလှောင်ခြင်း 2015-01-28
ယခင်: Daniel S. McCOY, CAS ။ အသံထုတ်ကုန်များ ၆၆၄ ထုတ်လုပ်မှုရောနှောမှုကိုဖွင့်သည်
နောက်တစ်ခု: AES '' Plugfest '' သက်တမ်းရှိ Digigram ရဲ့ AES67 / RAVENNA အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာအောင်မြင်မှု